Ma dooneysaa Fikrado Cusub oo Shaqa Abuur Ah (small investments ) |Tukesomalism.com |
Usama Cismaan — March 13, 2016
Hadaad ka daashay shaqa la’aan inaad la fadhiisatid gurigaada, wadooyinkana aad la taagnaatid waxaan kugula talinaaya inaad waqtiga iska lumin, waqtigu waa qaali intaad dhalinyaro tahay ka faa,iidayso .
Akhristow halkaan waxaan kuugu soo bandhigaaya fursad aad ku abuuran kartid shaqo gooni kuu ah oo aad ka faa,iidid waxbadan oo lacag ah. Marka hore inta aanan kusiin fikradaha cusub oo aad ku shaqaysan kartid. Waxaa loo baahanyahay inaad is waydiisid su’aalahan soo socda:
1-waa maxay ujeedka aan u dhisaayo mashruucayga?
2- waa maxay shaqooyinka aan qabsan karo oo aan awooda uleeyahay ?
3- waa maxay mashaariicda ugu waaweyn oo maalgalin badan u baahan?
4- waa maxay mashaariicda ugu fiican oo maalgalinteeda yartahay ama aan awoodo?
5- waa maxay mashruuca ugu faaiidada badan oo aan labo jibaar maalgashigeygi hore aan kasoo celinkaro?
Hadaba waa kuwaan fikradaha cusub oo aaad ka shaqaysankartid kuna faa,iidi kartid :
1- Mashruuca iibinta qalabka aaladaha casriga ah (electronics) sida : radiyaha dhalooyinka tiifiiyada, telefonada iwm .
2- Mashruuca furista xarun lagu hagaajiyo taleefanada laguna gado agabka lagu qurxiyo moobeelada .
3- Mashruuca aruurinta shimbiraha iyo kaluunka yaryar ee xafiisyada lagu qurxisto .
4- Mashruuca furista xafiis kiraalayaal ah (dilaal) sida ( guryaha, dhulalka, beeraha, gaadiidka iwm)
5- Mashruuca furista xafiis loogu talagalay adeegyada guud ee wax loogu qabto dadwaynaha .
6- Mashruuca iibinta iyo hagaajinta kombiyuutarada iyo daabicida warqadaha ( printing services).
7- Mashruuca hagaajinta qalabyada wax lagu qaboojiyo ee guryaha loo isticmaalo sida (qaboojiyaha iyo talaagadaha ).
8- Mashruuca ilaalinta iyo qurxinta beeraha nasashada lagu qaato.
9- Mashruuca iibinta qalabyada lasoo isticmaalay ee suuqa la keeno ( xaraashka).
10- Mashruuca aruurinta (kaydinta ) digaagadaha iyo bacraminta ukumahooda .
11- Mashruuca qalista hilibka digaagadaha iyo iibintooda .
12- Mashruuca furista xarun baabuurta lagu dhaqo .
13- Mashruuca furista maqaayada laga cunteeyo oo wadooyinka waaweyn ee magaalada kabaxsan kuyaala .
Dhamaan mashruucyadaan aan kor kusoo xusay waa kuwo lagu shaqeysan karo oo faaiidoyin badan uleh bulshada oo aysan kamaarmin.
Aqristoow mashruuc kasta ma ahan inaad isku daydid ee waa inaad qiimaysa mashruuca kugu aadan oo aad awood u leedahay ,waxaa dhici karta inay fikrado intaas kabadan aad ka dhex heshid qoraalkan, laakiin waxaa lagaga baahanyahay mashruuc kasta intaadan bilaabin inaad daraaso kusameysid oo aad qiimaysid, la talina aad ka heshid dadka uleh aqoonta abuurista mashaariicda.
Tags: Ma doonaysaa fikirado ganacsi ah
Next post Ka Dheeroow Cuntooyinkan Wakhtiga Habeenkii|Tukesomalism.com
Previous post Waa Sidan Habka Ugu Wanaagsan ee Dadka Loolla Dhaqmo
omar yasin ibrahin
March 9, 2019 at 8:09 pm	— Reply
aaad u mahadsan tihiin
my name omar yasin brahim